Mobile Modedeenfr esptarshtrsqlnitfamabgswtaruamtiroAnagu yaanu nahaythemenintegrationsangeboteWaanada qof ba qofka kala u soo jeedinayohomeContact > Waxbarasho > Waxbarashada joogtada ah Waxbarashada joogtada ah Si aad u joogteyso heerka aqoontaada oo la xiriirta xirfaddaada iyo shaqadada, waxa haboon in aad waxabarashada joogteyso oo aad kororsatid aqoon dhumuc leh si aad markasta u baratid xirfad ama farsamo dheeraad ah, si aad u kasbatid dalacaad iyo derejo sare.
Qorshe u yeel xirfadaada
Xafiisyada ama heyadaha dadka kala taliya ama u jiheya xirfadaha uu qofku doonayo, waxa laga helaa matxafyadooda macluumaad badan oo ku saabsan waxabarashada joogtada ah ee lagu barto Swiiska.
Kasbashada shahaadada CFC waxa loo maraa dowyo kale
Waxbarashada heerka jaamacadeed marka aad dhameysato ka dib, waxa la galaa waxbarasho joogto ah oo taxan
Waxa jira xirfado iyo farsamado u baahan in waxbarashadooda la joogteyo.
Waxa haboon in qof kasta oo aqoon leh ama xirfad sare lehi uu joogteyo wabarashada, waayo xuduud ma laha. Aqoonyahanada wadankan ku nooli mar kasta waxay ku jiraan aqoon kororsi. Takhaatiirta, garyaqaanada, badankooda iyo injeyeerada iyo kuwa la mid ahi usbuuci maalin ayey galaan aqoon kororsi. U tartan hanashada shahaadada CFC aadoo u maraya dow kale – Waa tilaabo aad muhim ugu ah jaaliyadaha ajnebiga ah.
Dadka waayeelka ah ee muddo dheer soo shaqeynayay, waayo aragnimo dheeraad ah na leh, waxay geli karaan imtixaanka ugu dambeya ee lagu qaadanayo shahaadada Federaalka ee farsamada, CFC (Certificat Fédéral de Capacité), haddii ay la yimaadaan shuruudo lagu xirayo.
Xafiisyada u qaabilsan kantoonada ayaa lagu hagaajinayaa arjiga lagu dalbayo ka qaybgalka imtixaanka ugu dambeya. Xafiisyadaasi waxay ku siinayaan talooyin iyo macluumaadka aad u baahantahay, aygaa na leh go’aanka in aad gashid imtiaanka iyo in kale.Related links:
Xafiiska kantoonada ee waxbarashada farsamadaha Habka loo helo minxada wabarashada joogtada ah Weiterbildung.ch Offres de formation Waxbarashada joogtada ah ee heerka jaamacadeed Waxbarashada joogtada ah ee ay ku deeqaan dugsiyada heerka sar- sare ee takhasuska (HES) taxan Waxbarashada joogtada ah ee ay ku deeqaan dugsiyada heerka sare ee (ES) Waxbarashada joogtada ah ee qaybta ganacsiga Waxbarashada joogtada ah ee qaybta xirfadaha iyo kombiyuutarka Ururka Swiiska ee taageera waxabarashada joogtada ah Ururka Swiiska ee u dooda jaamacadda shacbiga Kalaidos, xarunta gaar ahaaneed ee ugu weyn waabarashada joogtada ah Ururka iyo dugsiyada barashada akhriska iyo qoridda Swissuni.ch themen/arbeitthemen/auslaenderrechtthemen/asylrechtthemen/ehethemen/familiethemen/gesundheitthemen/integrationthemen/konsumthemen/sociale-sicherheitthemen/wohnenthemen/versicherungenthemen/steuernthemen/frauenthemen/alterthemen/verkehrthemen/religionthemen/auslaenderorganisationenthemen/sexualitaetLacagta iyo dhaqaalaha WaxbarashoAqoonsiga shahaadooyinkaBarashada luqadaha wadaniga ah ee Swiiska Dugsiyada derejada labaad IIDugsiyada heerka khsabka ahDugsiyada heerka xadaanada iyo qastiga laga leeyahayJaamacadaha iyo dugsiyada heerarka sar-sareMinxada iyo deeqda waxbarashoSida Swiiska loogu soo geli karo dow waxbarasho iyo kororsi aqooneedWaxbarashada FarsamadaWaxbarashada joogtada ah